Computer Programming ဆိုတာ ကျက်စာမဟုတ်
by yee khin zaw on Tue Jul 27, 2010 9:39 pm
“ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Computer Programming ကို ကျက်ဖြေကြတာ များတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အနေနဲ့လည်း Program တစ်ပုဒ် ရေးဖြေထားတာကို စစ်ဖို့ ဆိုရင် အများကြီးဆိုတော့ မလွယ်ဘူး။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ရေးထားတာကို မှန်လား မှားလား စစ်ဖို့ဆိုတာ တစ်ယောက်ကို အနည်းဆုံး ဆယ်မိနစ်၊ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အချိန်ပေးရမယ်လေ။ ဒီတော့ သူတို့ ရေးပေးထားတဲ့အတိုင်း ဖြေထားတာကို စစ်လိုက်တော့ လွယ်သွားတာပေါ့” သူ Reason နဲ့ သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း Computer Programming ဆိုတာ အဖြေမှန်ဖို့ အဓိက သင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားတတ်အောင် သင်ရတာပါ။ တစ်ခြား နည်းတွေနဲ့ စဉ်းစားနည်းတွေကို သင်မယ်ဆိုရင် အကုန်အကျ များပါတယ်။ Maths တို့ Computer Programming တို့ကတော့ အကုန်အကျ သက်သက်သာသာနဲ့ စဉ်းစားနည်းကို သင်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားနည်းကို သင်ရမယ့်အစား ကျက်ဖြေနေတယ် ဆိုရင်တော့ အလွဲကြီးလွဲနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။တကယ်တော့ Computer Programming ဆိုတာ ဆရာကို အဖြေစစ်ခိုင်းစရာ မလိုတဲ့ နည်းပညာကဲ ပညာရပ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အဖြေ မှန်မမှန် အလွယ်တကူ စစ်လို့ရသလို၊ နောက်ထပ် မူကွဲတွေ၊ လုံးဝမတူတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရမှာ အများဆုံး စဉ်းစားလို့ ရတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်သမာရိုးကျ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာက ရှေ့က Program ကို ရေးပြ၊ နောက်က တပည့်တွေက လိုက်ကူး၊ ပြီးရင်း ကူးထားတဲ့ အတိုင်း ပြန်ဖြေဆိုရင် Computer Programming ရဲ့ အနှစ်သာရတွေ အကုန် ပျောက်ကွယ် သွားပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့ အလေ့အထကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတတ်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုလုံးကို မြောင်းထဲ လွတ်ပစ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အရာရာ မှာ Creative၊ Innovative ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တွင်တွင်ရွတ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ Capacity Building အတွက် အများကြီး ထိခိုက်သွား စေပါတယ်။
Computer Programming အခြေခံအပိုင်းတွေဟာ တကယ်တော့ ကွန်ပျူတာအထူးပြု ကျောင်းသားတွေမှ သင်ယူသင့်တဲ့ ပညာရပ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဆိုရင် Computer Programming အခြေခံပိုင်းကို ကျောင်းသားတိုင်း သင်ဖို့၊ သင်နိုင်ဖို့ စီစဉ် ထားကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခု သူတို့မှာ အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍက ပါနေတာ သင်္ချာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ သင်္ချာရော Computer Programming ပါ ဆက်စပ်မှု အများကြီး ရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အတွေးကို သင်တဲ့နေရာမှာ အကုန်အကျ အနည်းဆုံးက သင်္ချာနဲ့ Computer Programming ပါလို့။ တစ်ခြား သိပ္ပံဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ အတွေးကို သင်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် အင်မတန် များသွားပါလိမ့်မယ်။ သင်္ချာနဲ့ သင်မယ်ဆိုရင် Whiteboard တစ်ခုရယ် စာအုပ်တစ်အုပ်ရယ် လောက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Computer Programming ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး လိုလာမှာပေါ။ ဒါကလည်း အကုန်အကျ နည်းတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ Computer မှ မကိုင်တတ်ရင် Digital Divide က ကြီးသွားမှာ ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာကို ထည့်တွက်လို့ သေချာပေါက် ရနိုင်တဲ့ ခေတ်ကြီး မဟုတ်ပါလားဗျာ။
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြန်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
1. Computer Programming ကို ကျက်ဖြေနေကြတယ်။
2. Computer Programming အဖြေလွှာတွေကို စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်။
3. ပုံမှန် သမာရိုးကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ Computer Programming ကိုသင်မယ်ဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
4. Computer Programming ဆိုတာ ကျောင်းသားတိုင်း သင်ယူသင့်တဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။
5. အတွေးတွေကို တွေးတတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ နေရာမှာ Computer Programming က ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးပဲ။
6. Computer Programming ဆိုတာ ဆရာကို အဖြေစစ်ခိုင်းစရာ မလိုတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီအပြင် မူကွဲများ၊ နည်လမ်းသစ်များကို စဉ်းစားတဲ့ နေရာများ အကောင်းဆုံး စဉ်းစားလို့ ရတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။
7. Capacity Building အတွက် အရေးပါတယ်။
စတဲ့ အချက်တွေ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ဖြစ်အေင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။ ဘာတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုလဲ ဆိုတာကို လေ့လာ ကြည့်ရအောင်။
* အဆင့်မြင့်ပိုင်းတွေမှာ UI Interface တွေ ကောင်းသလောက် အခြေခံအဆင့်အတွက် UI Interface က ညံ့လွန်းနေခြင်း
* အခြေခံအဆင့်အတွက် Programming ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ကျဉ်းလွန်းနေခြင်း
* အခြေခံအဆင့်အတွက် Learning Curve မြင့်လွန်းနေခြင်း
* သီအိုရီများကို အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် သင်ယူရခြင်း
* Computer Programming Language များနှင့် မရင်းနှီးခြင်း
စတဲ့အချက်တွေ အများကြီး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Programming သင်ကြားနည်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းသစ်များ
အဲဒီလို အခက်အခဲတွေအတွက် နည်းလမ်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား။ ရှိတာပေါ့။ လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရဆိုသလိုပါပဲ။ လိုလျှင်ကြံဆကြတဲ့ သူတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ့် ကြီးကြီးမာစတာတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Computer Programming သင်ကြားနည်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းသစ်များ ဆိုပါတော့။ ဘယ်လို ကြီးကြီး မာစတာတွေက တီထွင် ဖန်တီးနေကြတာလဲ။ လေ့လာကြည့်ရအောင်
* Alice – သူလည်း အလကားရတယ်ဗျ၊ သူ့ဆိုက်မှာ သွားဒေါင်းယုံပဲ၊ ကော်နက်ရှင် မကောင်းဘူးလား၊ လွယ်ပါတယ်၊ သူများ ဒေါင်းပြီးသား သွားကူးပေါ့။
* Teacher Guide – အဲဒီအတွက်လည်း အပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်ဗျာ။
* Student တွေအတွက်ကတော့ သင်ပေးတဲ့ ဆရာလိုမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါလည်း အများကြီးတော့ သင့်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ တော်ရုံဆို ကလေးတွေကို ပိုတတ်ကြပါတယ်။
ကဲ ကျွန်တော်တို့တွေ Programming ကို ကျက်ဖြေနေတာတွေကို ရပ်တန့်ချင်တယ်ဆိုရင် ခုလို အခမဲ့ အစီအစဉ်တွေ သုံးကြပါ၊ သုံးဖို့ တိုက်တွန်းကြပါ၊ သုံးဖို့ ပညာပေးကြပါ၊ သုံးဖို့ ကူညီကြပါ၊ သုံးဖို့ သင်ယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံချုပ်ပါတယ်ဗျာ။ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။
http://www.myanmartutorials.com/mm-tutorials/articles/new-ways-of-learning-computer-programming/ မှ ကူး ယူဖော်ပြပါတယ်။
Re: Computer Programming ဆိုတာ ကျက်စာမဟုတ်
by Si Thu Kyaw on Sat Sep 01, 2012 2:08 pm